Degmada Södertälje oo soo dhaweysey Hindisaha xukumada ee Qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmada Södertälje oo soo dhaweysey Hindisaha xukumada ee Qaxootiga
La daabacay måndag 26 augusti 2013 kl 15.14
Degmada qaabila qaxootiga badan ayaa ku faa'idaya qorsho dhaqaale oo ay dowladda ku talisey, kaas o ah hadba degmada inta qaxooti oo ay qaabisho dhaqaale lagu siiyo, halka kuwo ay yartahay qaabilaadooda qaxootiga lacagta laga yareynayo. Södertälje ayaa kamid degmooyinka ku faa'idaya hanaanka cusub ee xukumada.
Boel Godner waa gudoomiyaha degmada Södertälje kommun, aad ayeyna ugu qanacsan tahay hindisahan cusub ee xukumada:
- Waxaan qabaa in ay tahay arin fiican. Waa arin farxad leh in xukumado in ay dhageysato degmada Södertälje. Arintan dhowre sanno ayaan dalbaneyney, in la siiyo dhaqaalo dheeraad ah degmooyinka xilka iska saarey qaabilaada qaxootiga Iswiidhen.
Hindisaha xukumada oo ku jira miisaaniyada 2014 ayaa ku talinaya in la hirgeliyo hanaan cusub oo dhaqaalo dheeraad ah lagu siinayo degmooyinka qaabila qaxooti badan. Hadii degmo qaabisho qaxooti badan marka loo fiiriyo shacabka ku nool waxey heleysaa dhaqaalo badan, halka degmada qaabisha xaqooti yar marka loo fiiriyo shacabka ku nool laga dhimayo dhaqaalaha.
Sida uu qabo wasiirka is-dhex-galka hanaankan cusub ayaa ah mid cadaalada u ah hanaanka qaabilaada qaxootiga.
- Waxuu hanaanka dhaqaale noqonayaa mid cadaalad u ah qaabilaada qaxootiga. Degmooyinka Södertälje, Borlänge iyo Kristianstad waxey helayaan dhaqaalo dheerad ah madaamada ay masuuliyed weyn iska saareen qaabilaada qaxootiga, halka degmooyinka kalo ah Vellinge, Danderyd iyo Lerum ay helayaan dhaqaalo ka yar, ayuu yeri wasiirka is-dhex-galka Iswiidhen.
Boel Godner, gudoomiyaha maamulka Södertälje kommun ayaa rajeyneysa in hanaanka uu horseedo in degmooyinka si siman u qaybsadaan qaabilaada qaxootiga.
- Waxaan runtii rajeynayaa in ay saameyn ku yeelato degmooyinka kale oo ay masuuliyed weyn iska saaran qaabilaada qaxootiga Iswiidhen. Waddanka oo dhan ayey tahay in masuuliyed weyn layska saaro siyaasada qaxootiga, madaamada ay tahay arin qaran ahaan.
Degmooyin ku faa'idaya qaabilaada qaxootiga